Muxuu Madaxwenaha xiriirka UEFA ka yiri in tartanka EURO markale lagu qabto dhowr dal oo kala duwan sida Euro 2020 oo kale? – Gool FM
Muxuu Madaxwenaha xiriirka UEFA ka yiri in tartanka EURO markale lagu qabto dhowr dal oo kala duwan sida Euro 2020 oo kale?
Ahmed Nur July 10, 2021
(Nyon) 10 Luulyo 2021. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee Aleksander Ceferin ayaa ka hadlay natiijada ka dhalatay in tartanka EURO 2020 lagu qabto dhowr dal oo kala duwan, isagoo intaas ku daray go’aankiisa ku aaddan in markale lagu qabto tartankan magaalooyin ku kala yaalla dalal kala duwan.
Madaxweynaha UEFA ayaa sheegay inaysan caddaalad ahayn in tartanka lagu qabto goobo kala duwan isagoo intaas raaciyay inaysan mar kale dhici doonin in qaabkan oo kale loo dhigo marti gelintiisa.
EURO 2020 ayaa loo jadwaleeyay in lagu qabto 13 magaalo oo ku kala yaalla dalal kala duwan oo dhaca qaaradda Yurub, balse faafitaankii Korona Fayras awgiis ayaa loogu soo koobay 11 magaalo oo kala ah London, Glasgow, Amsterdam, Copenhagen, Saint Petersburg, Seville, Munich, Baku, Rome, Bucharest iyo Budapest.
Dood badan ayaa ka dhalatay qaabka loo dhigay marti gelinta tartanka kaddib markii afarta xul ee wareegga nus-dhammaadka (England, Italy, Spain iyo Denmark)ciyaaray ay dhammaan saddexdii kulan ee guruubka ku ciyaareen dalalkooda, halka Ingiriiska uu garoonkiisa ku ciyaarayo lix ka mid ah toddobada ciyaarood ee tartanka marka lagu daro fiinaalka.
“Markale ma sii taageeri lahayn” ayuu u sheegay BBC Sport isagoo ka hadlayay suurogalnimada markale tartankan loogu qabanayo qaab la mid ah midka EURO 2020.
“Aad ayay u dhib badan tahay, marka loo fiiriyo in xulalka qaar ay safraan wax ka badan 10 kun oo kilo mitir kuwa kalena ay safraan kaliya kun kilo mitir waa mid aanan sax ahayn, caddaalad uma ahan taageerayaasha kusoo ciyaaray Rome haddana ciyaarta xigta u safraya Baku oo diyaarad loo sii saarnaanayo afar saacadood iyo bar.
“Waa inaan wax badan u safarnaa dalal leh sharciyo kala duwan, lacago kala duwan, qaar ay ku jiraan Midowga Yurub, qaarna aysan ku jirin, sidaas darteed ma’ahan wax fudud, balse waa qaab la dajiyay intaanan aniga imaanin, waana qaddariyay, waa fikrad dhadhan leh balse ay adag tahay hirgelinteeda mana u maleynayo inaan mar kale sameyn doonno” ayuu hadalkiisa ku daray Madaxweyne Ceferin.
Dhinaca kale 53-sano jirkan kasoo jeeda dalka Slovenia ayaa tartanka Euro ee sanadkan ku tilmaamay mid xiiso leh sidoo kalena fiinaalka laga filan doono ciyaar cajiib ah.
Si kastaba ha ahaatee, tartanka qarammada qaaradda Yurub ayaa lagu marti gelin jiray hal dal ama marmar in laba dal ay si wada jir ah u marti geliyaan, balse dhacdadaan ayaa ka geddisan dhammaan tartammadii xulalka Yurub iyadoo markii ugu horreeyay lagu marti geliyay 11 magaalo oo ku yaalla 11 dal oo kala duwan.
Barcelona iyo Atletico Madrid oo ka fikiraya inay is dhaafsadaan laba xiddig & Griezmann oo qayb ka ah heshiiska la qorsheynayo
RASMI: Kooxda Arsenal oo dhammaystirtay saxiixeedii ugu horreeyey xagaaga… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa?)